उत्तर दक्षिण संघीयता नै उचित देखिन्छ – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०८:१० English
उत्तर दक्षिण संघीयता नै उचित देखिन्छ
० तपाई जनतास“गको टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, किन ?
– यतिबेला जनमत र राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै हिड्नुपर्छ भन्ने मान्यताकासथ मैले यो अभियानको सुरुवात गरेको हु । जनमतलाई छोडेर हिड्ने राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई अग्रगामी दिशातिर लैजादैन । जनमत के भन्दैछ भनेर बुभ्mनु र हामीले उच्चस्तरमा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने प्रकृयालाई ताद्म्य मिलाएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
० जनताले के भनिरहेका छन त ?
– चाँडोभन्दा चाँडो राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुनुपर्छ । जेठ १४ भित्र शान्ति र संविधान कुनै पनि हालतमा पूरा भएकै हुनुपर्छ । देशले नयाँ संविधान पाउनुपर्छ । यो नयाँ संविधानमा कुनै पनि कुरा उत्ताउलोपना आउनु हुँदैन । हाम्रो देशको वास्तविकता र यथार्थको संविधान बन्नुपर्छ । जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने होइन, यो यथास्थितिको आधारमा पनि होइन, मुलुकको पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । यी भावना व्यापकरुपले जनतामा मैले पाएको छु ।
० जेठ १४ मा मुलुकले संविधान पाउदैन कि भन्ने आशंका पनि देखियो नि ?
– आम जनतामा यो आशंका छ । किनभने हामीसँग छोटो समय छ । यो छोटो अवधिमा धेरै काम पूरा गर्न बाँकी छ । सहमति हुने तर सहमति लागू नहुने यो प्रकृया दोहोरिदै आएको छ । अब सहमति हुँदा त्यो लागू हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आम जनतामा देशभरि छ । यो आशंकालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले देशका राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुन जरुरी छ ।
० सम्बोधन गर्ने आधारहरु के ?
– सम्बोधन गर्ने भनेको नै शान्ति प्रकृयालाई अविलम्ब टुग्याउने हो । चैत मसान्तभित्र शान्ति प्रकृया टुंगो लगाउने नेकपा माओवादीले पनि के प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । यो प्रतिबद्धतालाई उहाँहरुले पूरा गर्नुप¥र्यो । यो नेकपा एमाले र कांगे्रसले पूरा गरेर हुने प्रतिबद्धता होइन । तर माओवादी अग्रसर भएपछि नभइनहुने कुरा हो ।
० विवादित मुख्य विषयमा दलहरुबीच सहमति बनेकै छैन ?
– संविधान पूरा गर्ने सिलसिलामा हामीसँग पाँचवटा कुरा छन् । शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनर्संरचना, न्याय प्रणाली, निर्वाचन र नागरिकताको मुद्दा हुन् । यी पाँचै मुद्दामा हामी निरन्तर संवादमा छौं । नागरिकताको मुद्दा ठूलो होइन, यो मुद्दा गम्भीर अवश्य हो । तर महिला र पुरुषका बीचमा समानता हुने ढंगले हामीले त्यो कुरालाई टुंगो लगाउनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायलयको पक्षमा सबै तयार छन् । न्यायलयभित्रको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विवादहरु छन् । त्यो ठूलो विवाद होइन । राज्यको पुनर्संचनामा तीनवटा अवधारणा आएका छन् । यसबारे हामीले प्रचूर बहस गरिसकेका छौं । त्यो बहसका आधारमा हामीले अरु बहस गर्न बाँकी छैन । ती बहसमा उठेका तर्कहरु लेनदेन गरेर सहमतिमा हामी पुग्नुपर्छ । लेनदेन गर्दा नेपालको यथार्थता हामीले बुभ्mनुपर्छ । लामो समय हामीले निरंकुशता र अस्थिरताबाट आक्रान्त भयौं, त्यसबा हामी मुक्त हुनुपर्छ । विविधतालाई एकतामा कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
० राज्यको पुनर्संरचना कसरी हुन्छ ?
– यसबारे हामीले संविधानसभाबाट केही कुरा टुग्याइसकेका छौं । संघीयतामा जानेकी नजाने भन्ने प्रश्न टुगियो ।
० एमालेलेलाई संघीयता विरोध भनेर मधेशी दलहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ।
– मधेशी दलहरुले आरोप लगाउनु भनेको त्यो उनीहरुले खाजा खाने, पानी खाने कुराहरु मात्र हो । उनीहरुको दैनिकमा पर्छ त्यो । त्यो दैनिकमा पर्ने कुरासँग हामीलाई सरोकार छैन । आम जनतालाई पनि सरोकार छैन । हाम्रो देश संघीयतामा प्रवेश गरिसक्यो, अब संघीयताबाट तलमाथि हुन सक्दैन । आवाजहरु उठ्न सक्छन्, ठीक छ, त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । संघीयताबाट एमाले पछि हट्दैन । कस्तो धरातल निर्माण गरेर जाने भन्ने विवाद संविधानसभाले टुंगो लगाइसक्यो । संविधानसभाले पहिचानका पाँच आधार र सामाथ्र्यका चार आधार अघि सारेको छ । पहिचान र सामाथ्र्यका आधारमा जान शीर्ष नेताहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको छ ।
० जातीय राज्यमा जाने सहमति भएको होइन ?
– जातीय राज्य होइन, पहिचानका पाँचवटा आधार छन् । त्यो पाँच आधारबाट कमन कुरा के हो ? त्यो निकाल्न सक्नुपर्छ । त्यसमा जातियताको कुरा पनि छ । हामी गम्भीर छौं, सबैभन्दा पहिला हामीले संख्याको कुरो टुंगो लगाउनु छ ।
० संख्या कति हुनसक्छ ?
– एकथरिले १५ भनिरहेका छन्, अर्कोथरि १४, कोही १०, कोही ३ वटा हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । मोटामोटीरुपमा मलाई अहिले भन्न दिनुहुन्छ भने त्यही ७–८ वटा संघीय इकाइ नेपालमा सञ्चालित हुनसक्छन् । जसरी हामी ७ वटा संघीयता छुटाउँछौं, त्यो पहिचानका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिचान निर्धारण गर्न त्यस्तो गाह्रो कुरा केही छैन ।
० सीमाङ्कन कसरी गर्ने ?
– सीमाङ्कनको ठूलो समस्या होइन । सबभन्दा पहिला हामीले संख्या निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नामाकंनको प्रश्न हो । नामांकन हामीले त्यहाँको विशेषताका आधारमा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक वा विभिन्न जाति समुदायका भाषाहरुलाई आधार बनाउन सक्छौं । जातीय प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने माग कसैले उठाएको पनि छैन ।
० माओवादीको मुख्य एजेण्डा जातीय राज्य होइन ?
– उनीहरुले त्यो ठाउँबाट उठान गरेर आए, त्यसले गर्दा समाजमा अलिकति बल्झाइदिने काम गरे । त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यो गलत कुरा हो । त्यो गलत कुराको उनीहरु आपैmले पनि महसुस गरेर आउन थालेको अवस्था देखिन्छ ।
० उत्तर–दक्षिणको सिमानकंन गर्दा के हुन्छ ?
– लङसम भविष्यको हिसाबले सोच्ने हो भने वास्तवमा उत्तर–दक्षिण राम्रो कुरा हो । यसो गर्दा सबैलाई हिमाल, पहाड र तराई पर्छ । देशको साधनस्रोतको उपयुक्त विभाजन पनि हुनसक्छ । तर अहिले जुन टे«न नेपालमा अघि बढेर आएको छ, यो टे«न चाहिँ उत्तर दक्षिण गर्नु हुँदैन, उत्तर दक्षिण भनेको त महेन्द्रवाद हो । यो महेन्द्रले आप्mनो निजी स्वार्थका लागि गरेको थियो, आदि इत्यादि रुपमा यो प्रचार भएको छ । यसप्रति नकरात्मक धारणा बढी बनेका छन् । वास्तवमा यो महेन्द्रवाद सहिन्द्रवाद केही पनि होइन, यो पनि प्राविधिकहरुले अध्ययन गरेर अघि सारेको अवधारणा हो । तर त्यसैलाई नै पूजा गरेर बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । अहिले आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानका लागि उत्तर दक्षिण गर्नुहोस् अथवा पूर्व पश्चिम गर्नुहोस् तर सबैलाई चित्त बुझाएर जानुपर्छ । हामी जुन संरचना बनाउँदैछौं, भविष्यमा पनि त्यो परिमार्जिन र परिस्कृत हुँदै जाने ढोका पनि खुलै रहनेछ । अहिलेलाई हामीले समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ ।
० स्वयत्त प्रदेश मधेशबारे के भन्नुहुन्छ ?
– स्वयत्त प्रदेश मधेशभन्ने शब्दावली आपैmमा गन्जागोलपूर्ण छ । यो गन्जागोलको पक्षमा कोही पनि हुँदैन । तर तराई मधेशमा बसेका समुदाय जुन छन्, सबै प्रकारका हक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने म सबैभन्दा दृढ छु ।
० मधेश एक प्रदेश भन्ने त मोर्चाको बटमलाइन छ नि ?
– यो राष्ट्रको समग्र हित जे हो, त्यो समग्र हितलाई सर्वपरी राखेर हामी जानुपर्छ । कुनै पनि एउटा जाति विशेष, एउटा क्षेत्र विशेषका मानिस, एउटा पार्टी विशेषका मानिसहरुले मेरो यो बटमलाइन हो, यो चल्यो भने चल्यो, होइन भने म विखण्डनमा जान्छु भन्छ भने त्यो एउटा पाखण्डबाहेक अर्को केही पनि हुँदैन । पाखण्डतर्पm हामी कसैले पनि लाग्न जरुरी छैन । हामीले राष्ट्रहितलाई प्रमुखतामा राखेर जेठ १४ भित्र पूरा गर्नुपर्ने मिसन छ, त्यो मिसनलाई केन्द्रविन्दूमा राखिकन मिलनको विन्दू खोज्ने कुरा गर्नुपर्छ । मधेशी मोर्चाले पनि मिलनको विन्दु नखोजेर हुन्छ ? मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर हुन्छ ? कांगे्रस, एमाले माओवादीले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्ने कुरा आउँदैन । सबैले आवश्यक लचकता अपनाउनुपर्छ ।
० संविधान सम्झौताको दस्तावेज आउछ ?
– संसारमा बनेका दुई सयभन्दा बढी जुन मुलुकका संविधानहरु छन्, ती सबै संविधान सहमतिका दस्तावेजहरु हुन् । नेपालमा यसभन्दा अघि बनेका संविधानहरु सहमतिका दस्तावेज बन्न सकेनन् । हामी पहिलो पटक लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन लागेका छौं । यो सहमतिको ऐतिहासिक राजनीतिक दस्तावेज हुनेछ ।
२८ चैत्र २०६८, मंगलवार १६:०९ मा प्रकाशित